Wararka Abol - Addis Maleda
Category: Wararka Abol
• Dawladdu waxay sheegtay in xidhiidhku aanu u kobcin sidii la rabay Guddiga Joogtada ah ee Arrimaha Dibadda iyo Nabadda iyo xubno ka tirsan Golaha Shacabka ayaa wax laga weydiiyay sida uu u socon karo xiriirka Eritrea iyo Itoobiya. Markii…
Sarkaal ka tirsan maamulka deegaanka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in dad ka badan 26 qof ay dabley aan haybtooda la aqoonsan ku dileen muddo hal bil gudaheed ah gobalka Konso iyo deegaanada deriska la ah ee maamulka Koonfur…
Wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga gobolladu waxay sheegtay inay socdaan hawlo lagu bedelayo ganacsatada sibidhka, laguna bedeli lahaa iskaashatooyinka macaamiisha ee gobol kasta. Agaasimaha Isgaadhsiinta ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Xidhiidhka Gobalada Kumneger Eshetu oo saaka u waramayay Wargeyska Addis maleda ayaa…
In ka badan 300 oo qof oo degan xaafadda Chefe ee magaalada Hawassa ee dowlad deegaanka Sidama ayaa sheegay in aan wax magdhow ah la siin muddo saddex sano ah. Dadka deegaanka ayaa saaka u sheegay Addis Ababa in Hay’adda…
Ka dib kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka, darawaladu waxay si iskood ah u kordhiyeen qiimaha wax ka badan kala badh
Ka dib markii uu sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka, waxaa magaalada Addis Ababa laga dareemay qiimo koror ku yimid gaadiidka isaga kala goosha Addis Ababa iyo dhanka Waqooyi ee Itoobiya. Korodhkan ma ahayn mid ay dawladdu samaysay ee…
Shirkadaha aan iska saarin hantida la iska saaro, oo ay ku jiraan maamulka qasriga, waxaa laga jari doonaa miisaaniyadooda
Hay’adda qandaraasyada iyo hantida dowladda ayaa shaaca ka qaaday in ay qaadi doonto tillaabooyin lagu dhimayo hoos u dhaca miisaaniyada hadii hay’adaha dowladda dhexe aysan ku takri falin hantidooda bisha soo socota. Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha ee Hay’adda Qandaraasyada iyo Hantida…
Waxaa sare u kac ku yimid qiimaha basasha ee magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka deegaanka
Macaamiisha ayaa wargeyska Addis maleda u sheegay in qiimaha basasha uu aad sare ugu kacay hal todobaad gudaheed Addis Ababa iyo magaalooyinka kale ee deegaanada. Macaamiisha oo saaka la hadlay wareyska addis maleda ayaa sheegay in qiimaha xashiishka uu kor…
In ka badan 80 bas oo Sheger ah ayaa shaqada joojiyay ka dib markii ay waayeen qalab ka mid ah baabuurta
In ka badan 80 bas ayaa shaqo la’aan ku ah qalab la’aan awgeed, sida ay shaacisay shirkadda adeegga gaadiidka ee Sheger. Madaxa xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Sheger Mass Transport Service, Samuel Fisseha, ayaa wargeyska Addis maleda u sheegay in shirkaddu…
Xafiiska Isku xirka Biyo-xidheenka Grand Renaissance ayaa ku dhawaaqay in ay jirto khasaare miisaaniyadeed oo aad u daran
Xafiiska Isku xidhka Biyo-xidheenka Grand Renaissance ayaa sheegay in ay haysato khasaare miisaaniyadeed oo daran. Agaasimaha Waaxda Xidhiidhka Dadweynaha iyo Isgaadhsiinta ee Xafiiska Hailu Abraham ayaa sheegay in xafiisku uu qabto shaqo aad u tiro yar, balse ay adag tahay…
Beerta Qaranka ee Buuraha Waqooyi 20 hektar ayaa la jaray
Beerta Qaranka ee Buuraha Waqooyi ee Aagga Waqooyiga Gonder ayaa banneeyay 20 hektar oo kayn ah, sida uu ku dhawaaqay Seeraha Qaranka ee Buuraha Waqooyi. Madaxa seeraha, Abebaw Azanaw, ayaa sheegay in khatarta ugu badan ee seeraha ay ka mid…
Toddoba hay’adood oo federaal ah ayaa hirgeliyay nidaamka wax iibsiga elektarooniga ah
Hay’adda Qandaraasyada iyo Hantida Dawladda ayaa ku dhawaaqday in 7 ka mid ah xafiisyada dawladdu ay ka hirgeliyeen nidaamka wax iibsiga ee Elektarooniga ah. Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha ee Hay’adda Qandaraasyada iyo Hantida Dawladda Gelan, ayaa saaka u sheegay magaalada Addis…
Waxay ka heshay $ 52.5 milyan alaabada hargaha iyo hargaha sagaal bilood gudahood
Xarunta Cilmi-baarista iyo Horumarinta Warshada Hargaha iyo Saamaha ayaa sheegtay in sagaalkii bilood ee la soo dhaafay ee sanadkan ay ka soo gashay 52.5 milyan USD. Sagaalkii bilood ee la soo dhaafay, intii u dhaxaysay July 1, 2013 ilaa March…
Waxaa la sheegay in inta badan lacagaha damiinada ah ee ay maxkamadaha qabtaan aan dib loo soo celin doonin
Dadka uu booliisku baadhayo ama dammaanad lagu sii daayo xeer ilaalintu waxay u dacwoodeen hay’adaha hoos yimaada in aan dammaanadooda dib loo soo celin doonin maadaama kiiskoodu taagan yahay. Dacwad oogayaasha ayaa ku andacoonaya in maxkamaduhu ay lacagta damiinka ah…
Waxaa la sheegay in farsamada lagu isticmaalo biyaha roobka ee saqafka sare ee saqafka ah waa in la isticmaalo
Tignoolajiyada saqafka biyaha roobka lagu gurto ayaa la ogaaday in ay si gaar ah faa’iido ugu leedahay dhulka hoose sida Borena, Guji Canfarta, iyo Soomaalida, halkaas oo laga yaabo in ay abaaro ka dhacaan, lagana yaabo in ay bilaabmaan jiilaalka…
Waxaa la diyaarinayaa qoraal qabyo ah oo lagu go’aaminayo masaafada ay jiraan biyaha
Wasaaradda Biyaha iyo Tamarta, waxa ay sheegtay in la diyaarinayo qoraal qabyo ah oo lagu ogaanayo fogaanta u dhaxaysa biyaha iyo dhulka iyo ilaalinta xuduudaha u dhexeeya biyaha, badqabka biyaha, horumarinta iyo dayactirka biyaha. Tewodros Mergia, oo ah Agaasimaha Isgaarsiinta…
Waxaa la sheegay in dhibaato hor leh ay ka dhalan doonto tacbashada dhul-beereed ee ku yaalla degmada Limu oo aan waqtigeeda la gaarin
Ka dib barakicintii OLF Shene ee ku nool degmada Limu, ee Bariga Welega, deegaanka Oromia; Dadka deegaanka ayaa walaac ka muujiyay in xiligan dalagyada ka soo go’a degmada ay kasii dari karaan xaalada hadda jirta. Isha xogta ee aan la…
Beeralayda ku nool degmada Selamago ee koonfurta Omo ayaa sheegay in muddo toban sano ah aan la bixin magdhowga dhulka
Deegaanka Koonfurta Omo ee ka tirsan degmada Salamago ee deegaanka shucuubta koonfureed in ka badan 50 ka mid ah beeralayda beesha Dime ayaa sheegay in aan wali wax magdhow ah laga siin dhulkii laga qaatay dhismaha wadada toban sano ka…
Maleeshiyada Gumuz iyo OLF Shene oo isku qabsaday dhac
Maleeshiyaad ka kala tirsan OLF iyo Gumuz oo ka howlgala Metekel Zone, Dabatena iyo Buulen oo ka tirsan Gobolka Benishangul-Gumz ayaa waxaa ka taagan xiisad colaadeed, kadib markii ay isku fahmi waayeen qeybsiga hanti la dhacay, sida ay sheegayaan warar…
Warshada Korontada ee Genale Dawa ayaa shaqaynaysay in ka badan sideed bilood balse aay hatan joojisay shaqadi aay waday
Biyo-xidheenka Genale Dawa III oo laga dhisay wabiga Daawa ee koonfur bari Itoobiya lana furay February 2012, waxa uu shaqaynayaa in ka badan sideed bilood. Ilo wareedyo aan la magacaabin ayaa ENA u sheegay in biyo xireenka uu awood u…
Cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay afar degmo oo ka tirsan deegaanka Axmaarada
udurka Jadeecada ayaa ka dilaacay afar degmo oo ka tirsan deegaanka Axmaarada, sida uu sheegay machadka caafimaadka bulshada ee dergaanka. Cudurka jadeecada ayaa laga soo sheegay afar degmo oo kala ah Jabi Tehnan, Machakel, Baso Liben iyo Manjar Shenkora ee…
66,000 oo tan oo kalluun ah ayaa la goostay sagaal bilood gudahood
Wasaaradda Beeraha ayaa sheegtay in sagaalkii bilood ee ugu horreysay sanad miisaaniyadeedkan ay soo gaartay 66,000 oo tan oo kalluun ah. Sida uu sheegay Agaasimaha Agaasinka Horumarinta Kalluumaysiga ee Wasaaradda Beeraha Xuseen Abegaz, waxa guud ahaan kalluun dhan 66,000 oo…
Rakaabku waxay ka cabanayaan inay bixiyaan wax ka badan tariifada safarrada dalka
Rakaabkii isaga kala goosha Addis Ababa ee u kala goosha gobolada iyo magaalo kale ayaa subaxii ka cabanayey Addis Ababa in lacag xad dhaaf ah laga siiyo. Wuxuu sheegay in xilliyada qaar gaadiidleyda ay si sharci darro ah uga qaadaan…
Sagaalkii bilood ee ugu horreeyay, 104 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dab iyo shilal Hanti lagu qiyaasay 161 Bilyan oo Birr ayaa ku burburtay
Hanti lagu qiyaasay 161 Bilyan oo Birr ayaa ku burburtay Guddida ka hortagga khatarta dabka iyo masiibooyinka ee maamulka magaalada Addis Ababa ayaa wargeyska Addis Maleda usheegay in 104 qof ay ku dhinteen dab iyo shilal sagaalkii bilood ee la…
6,305 caruur ah ayaa lagu waayay deegaanka Axmaarada
deegaanka Canfarta, Bangiyada ayaa noqday caqabad soo wajahday bulshada Wakiilka Amxaarada ayaa xaqiijiyay in 6,305 caruur ah ay waalidkood ku waayeen saddex gobal oo ka tirsan deegaanka. Ombudsman-ka Itoobiya ayaa soo saaray xog uruurin uu ku sameeyay xaaladaha bini’aadantinimo, adeegyada…
Xafiiska Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Deegaanka Harari ayaa la sheegay in Taalada Jeegol ay khatar ku jirto
Xafiiska Dhaqanka, Hiddaha iyo Dalxiiska ee dawlad deegaanka Harari ayaa shaaca ka qaaday in ay khatar ku jirto Taalada Jeegol ee ku yaala deegaanka Harari iyo nawaaxigeeda. Xarunta Dhaxalka Adduunka ee UNESCO, oo ah goob taariikheed in ka badan shan…
Siddeeddii bilood ee ugu horreysay sanadkan, in ka badan 3.9 bilyan oo birr ayaa laga helay hilibka iyo wax soo saarka caanaha
Machadka horumarinta wershadaha hilibka iyo caanaha ee dalka Itoobiya ee ERIDA ayaa sheegay in uu soo xareeyay lacag ka badan 3.9 bilyan oo Birr sideedii bilood ee ugu horeeyay sanad miisaaniyadeedkan. Natiijo ahaan, in ka badan 16,65 tan oo wax…
Maamulka Bakhtiyaa-nasiibka Qaranka ayaa daah-furay bakhtiyaanasiib gaaban oo fariin gaaban ah
Maamulka Bakhtiyaa nasiibka Qaranku waxa uu ku dhawaaqay in la bilaabayo adeega bakhtiyaanasiibka fariinta gaaban ka hor inta aanu dhamaan sanad miisaaniyadeedkan. Maamulka Bakhtiyaanasiibka Qaranka ayaa sheegay inay u suurtageli weyday inuu bilaabo adeeggan, kaddib markii ay shirkadda Ethio Telecom…
Shirkadda sarifka lacagaha qalaad ee dalka ka jirta ayaa sheegtay in aanay awoodin agabkii ay keeni lahayd
Qandaraasyada saadka ee dibadda waa la tirtiray Shirkadda sarifka lacagaha qalaad ee dalka ka jirta awgeed ayaa saaka la sheegay in aanay keeni karin agabkii ay ka keeni jirtay. Waxa uu sheegay in shirkaddu ay agabka wax soo saarka u…
300 oo maroodi ah ayaa Eritrea uga haajiray Beerta Qaranka ee Kafta Shiraro
In ka badan 300 oo maroodi ah oo ka soo jeeda Wolkait Tegede Humera Kafta Shiraro National Park ayaa u qaxay dalka Eritrea, sida lagu dhawaaqay saaka. Kabtan Barcot Dessie oo ah madaxa kooxda ilaalinta sharciga seeraha qaranka ee Kafta…
In ka badan 200 oo qoys oo ku nool xaafadda Flidero ee magaalada Burayu ayaa sheegay in gurigooda ay dumiyaan shaqaale ka tirsan xaafadda Flidero.
in ka badan 200 oo qoys oo ku nool gobalka Flydero (Melka Gefersa) ee hoos yimaada maamulka magaalada Burayu ee ku teedsan magaalada Addis Ababa ayaa cabasho ka dhan ah wageyska Addis Maleda ka sheegay in gurigoodii oo aanu degenayn…
Total views : 8945885